FSX/FSX: SE နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများ3နှစ်ပေါင်း5months ago #75
Is FSX/FSX: SE တစ်နာကျင်မှုဖြစ်ခြင်း? တစ်ခုခုပဲညာဘက်ကိုသွားမဟုတျလော ဒါဟာသင့်ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ဝေးမေးမြန်းဖို့ရာအရပ်ပါ! က bug တွေ, လေယာဉ်, ကို virtual cockpit, ဘာပဲဖြစ် ...
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: sruble
FSX/FSX: SE နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများ3နှစ်ပေါင်း5months ago #101
FSX/FSX: SE နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများ3နှစ်ပေါင်း5months ago #113
ကိုယ့်ကိုစတငျသညျ့အခါ fsx, ကိုယ့် Concorde ဗြိတိန်၏ကန ဦး အမှားနှင့်2ရှုခင်း၏အမှားများ: မက်ဆေ့ခ်ျကိုပယ်ဖျက်ဖို့ရှိသည်။ ဒီပြproblemsနာ ၃ ခုကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ။
FSX/FSX: SE နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများ3နှစ်ပေါင်း4months ago #115
Rolando wrote: ကိုယ့်ကိုစတငျသညျ့အခါ fsx, ကိုယ့် Concorde ဗြိတိန်၏ကန ဦး အမှားနှင့်2ရှုခင်း၏အမှားများ: မက်ဆေ့ခ်ျကိုပယ်ဖျက်ဖို့ရှိသည်။ ဒီပြproblemsနာ ၃ ခုကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ။
ငါသည်သင်တို့၏ရတဲ့အဘယ်အရာကို error message ကိုအတော်လေးမသေချာဘူး, ဒါပေမယ့်သင် install လုပ်လေယာဉ်မျိုးစုံမိတ္တူတိုနှင့်တူနီးပါးအသံ။ သူတို့ထဲက 1 ဖယ်ရှားခြင်းကြောင့်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။
FSX/FSX: SE နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများ3နှစ်ပေါင်း4months ago #118
သင့်ရဲ့အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသေချာမဖွစျ၏။ ငါပြန် Conncords ပြန်ဖွင့်ခဲ့တယျ, ဒါပေမယ့် installer ကိုမှန်ကန်စွာသစ်ကိုတပ်ဆင်ရှေ့တော်၌ထို installed ဗားရှင်းကိုဖယ်ရှားခဲ့ပေ။ အဆိုပါပြဿနာကိုအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်သင်ငါလုံးဝ Concorde deinstall, ပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ဖွင့်ရမယ်ထင်ကြသလော
FSX/FSX: SE နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများ3နှစ်ပေါင်း4months ago #119
Rolando wrote: သင်၏အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသေချာမဖွစျ၏။ ငါပြန် Conncords ပြန်ဖွင့်ခဲ့တယျ, ဒါပေမယ့် installer ကိုမှန်ကန်စွာသစ်ကိုတပ်ဆင်ရှေ့တော်၌ထို installed ဗားရှင်းကိုဖယ်ရှားခဲ့ပေ။ အဆိုပါပြဿနာကိုအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်သင်ငါလုံးဝ Concorde deinstall, ပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ဖွင့်ရမယ်ထင်ကြသလော
ငါလုံးဝဝန်အဆိုပါ Concorde (s) ကို uninstall လုပ်လိုက်မယ်လို့ FSX ဒါကြောင့်သင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးသည်, ကမပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်သူက install နှင့်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရလျှင်ကြည့်ပါ။
FSX/FSX: SE နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများ3နှစ်ပေါင်း4months ago #120
- သူတို့ထဲမှာမမြင်နိုင်ခဲ့ကြ (လုံးဝ Concorde uninstall fsx), ဒါပေမယ့်သတင်းစကားအတူတူပဲ!
- ကိုယ့်ကိုလည်းကွန်ပျူတာကို restart ပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်တူညီတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို
- ကိုယ့်အသစ်က The Concorde ဒေါင်းလုပ်လုပ်သူတို့ကို installed, တူညီတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို
ထူးဆန်းတဲ့မရှိ? ငါကြောင့်မှားယွင်းတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသိ don't ။
FSX/FSX: SE နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများ3နှစ်ပေါင်း4months ago #122
သငျသညျကိုသူတို့သွားကြပြီဟုနေသေချာအောင်ဖို့လေယာဉ် folder ထဲမှာ check လုပ်ထားပြီလော
(MY ကိစ္စတွင်မှာ, B, ဖွင့်: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft ကဂိမ်းများလေယာဉ် \_ Microsoft ကလေယာဉ် Simulator X ကို \_ SimObjects \_)
သင်အမှားတစ်ခုစခရင်ပုံ post နိုင်မလဲ? ကြောင်းငါ့ကိုနည်းနည်းကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
btw .. ဤသည်၌သင်၏အသည်းခံခြင်းတန်ဖိုးထားတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့စိတ်ပျက် (မပိုဒီတော့လျှင်) ငါ့ကိုထက်နေကိုငါသိ၏။ အဘယ်အရာကိုမျှငါအလုပ်မလုပ်ပစ္စည်းပစ္စယထက်ပိုမုန်းတီး။
FSX/FSX: SE နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများ3နှစ်ပေါင်း4months ago #133
မက်ဆေ့ခ်ျကို (ငါဆွစ်ဇာလန်ဖြစ်ကြောင်းကို) ဂျာမန်၌တည်ရှိ၏, ကအတိအကျကိုဆိုလိုသည်: အ Concorde ဗြိတိသျှ၏ initialising ၏အမှား။ အဆိုပါလေယာဉ်ဿုံပျံသန်းသောကွောငျ့ပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုစတငျသညျ့အခါကိုယ်သာပိုကလစ်ပြီ fsx...
ဒါကြောင့်, သင့်အကူအညီတောင်းအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သငျသညျအကြာတွင်အဖြေတစ်ခုရှိသည်မယ်လို့လျှင်, ငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
rolando ထိုင်းနိုင်ငံ, ဆွစ်လူနေမှု ...
FSX/FSX: SE နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများ3နှစ်ပေါင်း4months ago #134
ဒါကြောင့်ဘယ် Concorde ပါသလဲ ဒါကြောင့်သင်ဒီမှာကနေရတယ်တစ်ခုဖြစ်သည်?
ဒါကြောင့်ဂျာမန်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်အဖြစ်, ထိုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်မဟုတ်ဘူးအရမ်းရယ်ရတယ်ငါကျွမ်းကျင်စွာဂျာမန်ပြောတတ်သူကိုမိတ်ဆွေတစ်ဦး ^ _ ^ တယ်
0.335 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်